Immisa xumaan ah ayaa goobaha ay ka badiyaan tirada booqdayaasha? | Martech Zone
Khamiis, Juun 7, 2007 Sabtida, Janaayo 6, 2018 Douglas Karr
ComScore ayaa hadda sii daayay Warqad Cad oo ku saabsan tirtirka cookie. Kukiyada waa faylal yar oo bogagga shabakadda marin u helaan si ay u keydiyaan macluumaadka suuqgeynta, falanqaynta, Analytics, iyo in laga caawiyo khibrada isticmaalaha. Tusaale ahaan, markaad calaamadeyso sanduuq si aad ugu kaydiso macluumaadkaaga soo gelida goobta, waxaa caadi ahaan lagu keydiyaa cookie-ka waxaana la helaa marka xigta ee aad furto boggaas.
Waa maxay booqdaha gaarka ah?
Ujeeddooyinka gorfaynta, markasta oo degel websaydh ahi u sameeyo buskud, waxaa loo calaamadeeyay inuu yahay booqde cusub Markaad soo noqotid, waxay arkeen inaad horeyba u joogtay. Waxaa jira cilado kala duwan oo leh qaabkan:
Isticmaalayaashu waxay tirtiraan Kukiyada… wax badan oo aad uga fikirto.
Isla isticmaalaha ayaa marin ka hela shabakad kumbuyuutarro badan ama daalacashada.
Bogagga wararka gobolka waxay awood u leeyihiin inay lacag ka qaadaan xayeysiistayaasha iyagoo ku saleynaya macluumaadka sidan oo kale ah. Xaqiiqdii, Wargeyska Indianapolis ee maxalliga ah wuxuu leeyahay,
IndyStar.com waa bartamaha Indiana lambarka 1-aad ee loogu talagalay wararka iyo macluumaadka, iyada oo la helo in ka badan 30 milyan oo bog ah, 2.4 milyan oo soo booqdayaal u gaar ah iyo 4.7 milyan booqasho bishii.
Marka intee in le'eg ayay tirtiri kartaa nambarada tirada skew?
Natiijooyinka daraasaddu waxay muujinayaan in ku dhowaad 31 boqolkiiba isticmaaleyaasha kombuyuutarrada Mareykanka ay nadiifiyaan kumbuyuutarkooda koowaad ee bil gudaheed (ama ay ku caddeeyeen softiweer otomatig ah), celcelis ahaan 4.7 noocyo kala duwan ah ayaa lagu arkay isla goobta adeeggan. . Daraasado madaxbanaan oo hore oo ay sameeyeen Belden Associates 2004, by JupiterResearch in 2005 iyo Nielsen / NetRatings in 2005 sidoo kale waxay soo gabagabeeyeen in cookies la tirtiro ugu yaraan 30 boqolkiiba isticmaalayaasha internetka bil gudaheed.
Isticmaalka muunada guriga comScore US saldhig ahaan, celcelis ahaan 2.5 nooc oo buskud ah ayaa lagu arkay kumbuyuutar kasta oo Yahoo! Natiijadani waxay muujineysaa, tirtirka cookie awgeed, nidaamka cabbiraadda server-centric kaas oo adeegsada cookies si loo cabbiro cabbirka saldhigga booqdayaasha ayaa sida caadiga ah ka badin doona tirada dhabta ah ee soo booqdayaasha gaarka ah iyadoo loo marayo illaa 2.5x, taas oo ah in la yiraahdo xad dhaaf ah ilaa 150 boqolkiiba. Sidoo kale, daraasaddu waxay ogaatay in nidaamka adeegaha xayeysiiska oo adeegsanaya cookies si uu ula socdo gaadhista iyo inta jeer ee olole ad xayeysiin ah uu ka badbadin doono gaadhista illaa qodob dhan 2.6x iyo hoos u dhac ku yimaadda isla heerkaas. Baaxadda dhabta ah ee xad dhaafka ahi waxay kuxirantahay inta jeer ee booqashada goobta ama soo-gaadhista ololaha.
Xayeysiiyaasha ma laga faa'iideysanayaa?
Waxaa laga yaabaa in! Qaado degel sida bogga wararka maxalliga ah iyo in tirada 2.4 milyan markiiba ay hoos ugu dhacdo hal milyan oo soo booqda. Bogga wararka waa goob si isdaba joog ah loo booqdo sidoo kale, si tiradaasi ay uga wanaagsanaan karto intaas. Hadda ku dar tirada akhristayaasha booqda goobta guriga iyo shaqada waxaadna sii deyneysaa lambarkaas qadar kale oo muhiim ah.
Tani dhib ayey ku tahay dadkii hore ee 'eyeballs'. Inkasta oo dadka iibiya ay had iyo jeer wax ku iibinayaan tirooyinka, websaydhyadoodu waxay dhab ahaantii lahaan karaan booqdayaal aad uga yar kuwa warbaahinta tartamaya. Dabcan, ma jirto waddo dhab ah oo 'lagu xaliyo' arrinta. In kasta oo xirfadle websaydh kasta oo maskaxda badhkeed garanayaa in arrintu sidaa tahay, haddana iskuma dayi doono in aan sheego in boggaga ay si ula kac ah uga badinayaan tiradooda. Kama badinayaan tirakoobyadooda ujeedka… waxay si fudud uga warbixinayaan tirakoobka heerka warshadaha. Tirakoobyada dhacaya inay yihiin kuwo aad iyo aad aan la isku halleyn karin.
Sida barnaamij kasta oo suuqgeyn wanaagsan ah, waxaad diirada saartaa natiijooyinka oo ha udhigin tirada indhaha isha! Hadaad waa isbarbardhigga qiimaha udhaxeeya noocyada warbaahinta, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad dalbato xoogaa xisaab ah si tirooyinku ay u ahaadaan kuwo macquul ah!
Tags: lambarrada xayeysiiskaadvertisingtirinta xayeysiintaisku-dhafanTirtirida buskudkatirada booqdayaasha
Jun 8, 2007 saacadu markay ahayd 1:48 AM
Waxaa laga yaabaa in mustaqbalka wax ka mid ah khadadka CardSpace ay iftiimin doonaan dhibaatadan. In kastoo, ay noqon karto mid aad u weyn Walaal. Waa inaan sugnaa oo aan aragnaa.
Jun 8, 2007 saacadu markay ahayd 8:32 AM
waad sheegtay, ma jirto hab sax ah oo lagu go'aaminayo booqdayaasha gaarka ah ee degel websaydh ah.
buskudku maahan kuwo la isku halleyn karo oo hadda dad badan ayaa flash u adeegsanaya keydinta dhinaca macmiilka.
Laakiin xayeysiistayaasha, aragtida bogga ayaa ah waxa kaliya ee muhiimka ah. Way fududahay in si sax ah loo ogaado tirada jeer ee xayeysiinta la soo bandhigo 🙂
Ka dibna, adeegyo badan oo tirakoobka webka ah ayaa dhibaato halkaa ka jirta leh. Bogga tirakoobka tooska ah sida statcounter wuxuu tixgelin doonaa tiro kooban oo isticmaaleyaal ah markiiba.
Google Analytics aad ayuu ugafiican yahay tan, laakiin mararka qaar waa inaan sugaa 2 maalmood si aan u helo warbixintii ugu dambeysay 🙁
"Celcelis ahaan 2.5 nooc oo buskud ah ayaa lagu arkay kombuyuutar walba Yahoo!"
Immisa isticmaale Yahoo ah ayaa ku jira halkii kumbuyuutar guriga ah? Haa, malaha qiyaastii 2 ama 3. Waan ogahay inaan si joogto ah uga tagayo xaaskeyga si aan u hubiyo koontadayda, ha ahaato Yahoo ama Google, Schwab ama goob kale.
Gurigayaga dhexdiisa, waxaan ku dhacnaa inaan haysanno 4 PC iyo Mac khadka tooska ah oo u dhexeeya 2 qof oo waaweyn, sidaas darteed way dhacdaa inaad haysato hal kombiyuutar ama inbadan.
Haddii aad leedahay bogga diiwaangelinta iyo server-yadaada wax ku ool ah, samee warbixin ku saabsan magacyada cinwaan kasta oo IP ah. (tani waxay muujineysaa inta qof ee wadaagta kumbuyuutarrada / leh akoonno dup ah). Ka dib samee warbixin muujinaysa inta IPs magac kasta ka soo muuqday. (tani waxay muujineysaa in a) ips-ka dib loo warshadeeyo isps iyo b) dadka isticmaala waxay ka soo galaan goobaha mulitiple. )
Haa haa, lambarka 2.5 wuxuu ku saabsan yahay sax. Ma aha khiyaamo, ma badin, waa sax. Halkan sheeko ma leh. Soco hada.
Maqaalka la qoray kama hadlayo arrimaha soo gelitaanka / ka bixitaanka marka la eego cookies, wuxuu ka hadlayaa cookie tirtirid iyo saamaynta ay ku leedahay faallooyinka gaarka ah ee bogga. Yahoo! kama tirtiro cookies-ka markaad baxdo oo aad gasho.
Arrinta la isku haysto ayaa ah in in ka badan 30% qoysaska ay tirtiraan cookies-kooda, sidaa darteed waxaa laguu arkaa inaad tahay booqde cusub - oo aadan ahayn mid kale oo guriga ku jira. Fadlan u akhri maqaalka sharraxaad qoto dheer.
Tusaalahaagu sidoo kale waa waxa aan ku xusay qoraalkayga, in dad badani ay booqdaan isla goobta mashiinno kala duwan. Iyada oo leh 4 PC iyo Mac inta udhaxeysa 2 qof oo qaangaar ah, haddii aad ku booqato isla goobta mashiinnada oo dhan, waxaa laguu arki karaa illaa 5 'martida gaarka ah', oo aan ahayn 2.5! Iyo haddii aad si joogto ah u tirtirto kukiyada sida 30% + dadweynaha, taasi waxay u rogeysaa in ka badan 12.5 martida gaarka ah.
Sidii aan idhi, ma aaminsani inay khiyaamo tahay… laakiin waa la buunbuuniyey. Qoyskaaga ayaa caddeeya.
Dib u aqrinta maqaalka iyo jawaabtaada markale…waad saxantahay Asal ahaan waan fahmay arintaada. Waad ku mahadsantahay cadeynta.
Taas markii la dhaho, gautam waa sax – dad aad iyo aad u tiro badan ayaa adeegsanaya cookies cookies, xitaa marka aysan haysan sabab kale oo ay ugu adeegaan flash. Sir yar oo wasakh ah: si fudud (si fudud) uma tirtiri kartid cookies-ka ku dhex jira iftiinkaaga.
(Google's uma adeego flash badan. DoubleClick ayaa sameeya…)
Haddii bogagga ay rabaan inay nadiif ugu noqdaan xayeysiistayaasha, waxay u baahan yihiin daahfurnaan badan oo ku saabsan inta jeer ee sheyga la daawaday cidda, iyo goorma.
Maaddaama faylasha diiwaanku aysan ku fiicnayn taas, waxay u baahan doonaan macluumaad badan oo ku jira keydka xogta. Diiwaan aad u ballaaran.
Maaddaama aysan taasi dhowaan dhici doonin, fikradda ugu fiican, sida aad u sheegto, waa in diiradda la saaro natiijooyinka!